Paikady tsy mandamina | NewsMada
Paikady tsy mandamina
Mahavariana mihitsy ny mpanao politika eto Madagasikara. Misy ankolafiny maro izy ireo ary samy manana ny paikadiny avokoa. Ao ireo havanana amin’ny fanakorontanana fotsiny, fa tsy mahavita na inona na inona rehefa omena andraikitra. Ny sasany indray, manan-talenta amin’ny kabary ambony vavahady, nefa tsy mahefa akory raha tolorana adidy. Ny hafa, sady tsy hiasa no tsy hanao kabary fa manara-driandrano. Kalaza amin’ny manaiky be fahatany fotsiny.
Raha zohina, toa mitovy daholo izy rehetra fa tsy misy azo ianteherana, na iray aza. Tena mahamaika azy ireo ny fisehosehoana amin’ny fahitalavitra mba ho fanta-bahoaka. Mankalaza tena amin’ny hevitra poakaty. Manindrahindra vatana amin’ny paikady tsy mandamina.
Hdinon’izy rehetra ny fampandrosoana ny firenena sy ny fitsinjovana ny sosialim-bahoaka, izay zava-dehibe andrasana amin’izy rehetra. Misy ihany ireo miezaka manao izany, saingy kely fofonaina ka vetivety dia reraka ary tsy hita tabilao intsony.
Hatreto aloha, samy mihazakazaka mampiasa paikady hakana ny fon’ny vahoaka izy rehetra. Misy ny efa nahazo tombon-dalana, tsy niandry akory ny kiririokan’ny mpitsara. Ao kosa ireo vao manenjika fa ny ankamaroany, tsy mbola niainga. Mbola vao mametraka paikady tsy mandamina, hahazoana fandresena amin’ny fomba rehetra.
Ny tena mahazendana, ny fampiasana ny fivavahana ao anatin’ny paikady tsy mandamina. Tokony hatao izany satria ny firenena, tsy matahotra an’Andriamanitra, mivaralila. Nambara tany am-boalohany fa tendrin’ilay Ray Tsitoha ny hitondrany ny firenena. Nivadika ho fanoloran-tena hifaninanana amin’ny maha kandidà izany, aty aoriana. Mamitaka an’Andriamanitra sady mandainga amin’ny vahoaka. Manao paikady tsy mandamina. Aleo handeha hiaraha-mijery ê!